Olee otú Naghachi ehichapụ ozi na Android ekwentị mkpanaaka na
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi na Android
Onye na-anaghị ndị oge mgbe otu hiere ụzọ mgbata utịp ke nhichapụ nke a ndụ uru nke ozi ederede? Anyị niile ndidi mesoro dị otú ahụ ezighị taps dịkarịa ala otu ugboro ndụ anyị. The ezi ihe Otú ọ dị, ya bụ na ọ bụ omume na-naghachi ehichapụ ozi na android. Gam akporo igwe e kenyere ka unu wee debe a ndekọ nke ehichapụ data dị ka mma. Na data nwere ike inweta iji data nlaghachie softwares bụrụhaala na ọ bụghị na a dere jidesie. E nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala dị na Google Play maka nzube ụfọdụ n'ime ndị na free, ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ.
Ọzọkwa, a otutu desktọọpụ ngwa agbasaghị na-egosi elu mgbe ị na-eme a Google search-arịọ maka ozi mgbake software maka Android. Ihe dị mkpa na-echeta Otú ọ dị bụ, ọ bụghị ihe niile dị otú ahụ ngwa na-arụ ọrụ na ụfọdụ ndị mere hoaxes na e duba gị n'ime nbudata ha na mgbe ahụ ife efe gị laptọọpụ ma ọ bụ android ọ bụ abụọ. Izere ịdaba dị otú ahụ afia, mgbe anya maka reviews na otu software na ị bụ banyere iji na-eduzi ụfọdụ ndabere search. Ọ bụ mgbe atụ aro ka ị ka ojiji nke a tụkwasịrị obi ngwa site a reputed ụlọ ọrụ mere na usoro bụ nnọọ enem.
Ekwu okwu nke a pụrụ ịdabere na data mgbake softwares, Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) bụ otu n'ime a obiọma, nile na otu data naghachi software na-enyere onye ọrụ na-agbake ụdị ọ bụla nke na-ehichapụ data fọrọ nke nta ozugbo. Ọ ga-eji na-agbake ehichapụ ozi ederede, photos, akwụkwọ, na kọntaktị na ihe ndị ọzọ. Ọ dịghị achọ ka ndị ọrụ na-arụ a otutu technicalities ma ọ bụ na-a otutu oge nke ha na-eme. Ya nanị gāriọ click na mgbe ahụ na-elekọta niile data mgbake usoro onwe ya. Wondershare Dr.Fone Maka Android bụ dakọtara na ma Windows na Mac ịwa usoro. Ọzọkwa, ọ na-enye nkwado maka n'elu 2000 Android ngwaọrụ ụdị.
Nkuzi maka Olee naghachi ehichapụ ozi ederede site na Android
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị android ekwentị
Nke mbụ niile, ibudata na wụnye Android ederede mgbake ngwá ọrụ na kọmputa gị. Ọ bụghị onye na-eji ngwa ọ bụ a na desktọọpụ ngwá ọrụ. jikọọ gị Android ekwentị na kọmputa.
Nzọụkwụ 2 Kwado USB debugging on Android ngwaọrụ
Jide n'aka na ị nyeere USB debugging. Bụrụ na ọ bụghị, na-eso ụzọ n'okpuru aka ya.
1) N'ihi Android 2.3 ma ọ bụ tupu: enweta "Mwube"> pịa "Ngwa"> pịa "Development"> ego "USB debugging"
2) N'ihi na Android 3.0 4.1: enweta "Mwube"> pịa "Mmepụta nhọrọ"> ego "USB debugging
"3) N'ihi Android 4.2 ma ọ bụ ọhụrụ: enweta" Mwube "> pịa" Ihe ekwentị "> mgbata" Mee ọnụ ọgụgụ "ruo ọtụtụ ugboro ruo mgbe na-a dee" Ị bụ n'okpuru Mmepụta mode "> Back to" Mwube "> pịa" Mmepụta nhọrọ "> ego" USB debugging ".
Nzọụkwụ 3 Tụlee gị Android ekwentị
Mgbe mwube eriri debugging, reconnect ekwentị gị ọ bụrụ na ọ gwara gị ka i Ikwupu ya n'oge ọnọdụ. Mgbe ahụ ị ga-esi na window n'okpuru. Ebe ị mkpa ijide n'aka na ekwentị gị si batrị bụ ihe na-erughị 20% ebubo, na mgbe ahụ ị nwere ike pịa "Malite" ka usoro ihe omume nyochaa gị Android ekwentị.
Nzọụkwụ 4 iṅomi na-agbake ehichapụ SMS on Android
Mgbe ha nyochasịrị gị Android, ị nwere ike na-amalite na iṅomi ya ugbu a. Tupu eme ya, na-echigharịkwuru Ihuenyo nke ekwentị gị na pịa "Kwe Ka" na ya. Mgbe ahụ azụ ka omume na kọmputa gị ma pịa "Malite" na-amalite ịgụ isiokwu. Mgbe iṅomi dị n'elu, niile recoverable ozi, kọntaktị, foto na video na gị Android ga-hụrụ na-egosipụta na Doppler N'ihi. Ịnwere ike ihuchalu ọ bụla ozi, gụnyere SMS na WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme. Lelee ehichapụ ozi gị mkpa na mbupụ ha ka ha na kọmputa gị site na ịpị "Naghachi".
Video Tutorial: Olee naghachi ehichapụ ozi ederede site na Android
Atụmatụ: Mgbe Loose Ozi na Android
Ichekwa ndabere Android ozi na SMS ndabere +
1. SMS ndabere + bụ a free ozi nkwado ndabere na mpaghara ngwa dị na Google Play. Ọ nwere ike ibudata site https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zegoggles.smssync&hl=en.
2. Mgbe ngwaọrụ a mere wụnye, akpa ihuenyo gbagote ga-abụ yiri onye e gosiri n'okpuru.
3. Jide n'aka na checkbox kwekọrọ na "Jikọọ" nhọrọ e ndenye dị ka ngwa kwesịrị nwere ohere ka a irè Gmail akaụntụ ndabere gị ozi. Oge mbụ ị ga-kpaliri maka ohere ikike. Nyekwa ikike ịnọgide.
4. A ozi ga mmapụta na-arịọ gị na-ekwe ka ma ọ bụ ikwu mbụ ndabere. Họrọ "ndabere" inwe niile ozi gị kwadoo gị Gmail akaụntụ.
Ichekwa ndabere Android ozi na Wondershare MobileGo
Iji malite akwado gị data iji Wondershare MobileGo, gaba dị ka eduzi n'okpuru:
1. Download Wondershare MobileGo si http://mobilego.wondershare.com/ na wụnye ya na gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Ozugbo echichi bụ zuru ezu ẹkedori software. Jikọọ gị android ngwaọrụ gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa site n'ọnụ eriri USB. Họrọ "One-click ndabere" si n'ụlọ ihuenyo.
2. A window ga-apụta na-egosi na ọdịnaya nke ndabere faịlụ. Ego ma ọ bụ uncheck ihe dabeere na mmasị gị. Họrọ a ọnọdụ maka nkwado ndabere na mpaghara họrọ "Back Up".
3. Sochie ọganihu nke gị ndabere site n'idebe anya na window na-egosi na-esonụ.
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si gam akporo
Olee otú Download Songs Site Google Play
> Resource> Android> ụzọ dị mfe iji Naghachi ehichapụ ozi na Android ekwentị mkpanaaka na